Home Wararka Taliye Guuto oo ku dhintay dagaalka deegaanka Cadakibir
Taliye Guuto oo ku dhintay dagaalka deegaanka Cadakibir
Deegaanka Cadakibir oo qiyaastii Cadaado dhanka bari kaga beegan 60KM waxaa ka dhacay dagaal udhaxeya Ciidamada Galmudug iyo kuwa Al-shabaab waxaana la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan.
Dagaalka ayaa yimid ka dib markii ay Al-Shabaab weerar kusoo qaadeen deegaanka.
Allaha u naxariistee waxaa dhaawicii soo gaaray u geeriyooday taliyihii guutada 13-aad ee qeybta 21-aad Cali cagawayne kaas oo dhaawac kasoo gaaray dagaal galabta ka dhacay deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud.
Deegaanka Cadakibir waxaa horay u joogay ciidamo deegaanka iyo kuwa maamulka Galmudug.
Previous article[DEG DEG] Shabaab oo weeraray deegaanka Cadakibir
Next articleBooliiska Puntland oo gacanta ku dhigay qof loo eedaysan dilkii Cabdikaafi Cabdixafiid
Waa in 70 Sano ciidamda AMISOM ay joogaan Dalka Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galay xuska maalintii xoriyada gobolada waqooyi